Dowladda Iyo Galmudug Oo Heshiis Gaaray & Doorashadii Oo Dib Loo Dhigay – Goobjoog News
Wada hadallo habeenkii xalay ahaa illaa gelinkii hore ee maanta ay magaalada Cadaado ay wasiiro, xildhibaanno ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya la lahaayeen goleyaasha fulinta ee baarlamaanka Galmudug ayeey ku wada gaareen heshiis ku aadan xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha Galmudug iyo wadahadal lagu heshiinayo Ahlu-sunna Waljameeca iyo maamulka Galmudug.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u akhriyey heshiiska maanta Galmudug iyo dowladda Federaalka Cadaado ku wada saxiixeen.
“Waxaan rajeyneynaa howshaasi sidii aan u gaarnay iney u mira dhasho, waqtiga aanu haysanana waxaan ku dadaali donnaa in sida ugu fudud ee suurtagalnimada ah aan howshaasi u galno, dhinacyada ay quseyso dhan waxaan rajeyneynaa in si niyad furnaan ah in arrimahaasi loo fududeeyo”
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo isna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa Ahlu-sunna ugu baaqay iney tixgeliyaan dedaallada ay waddo dowladda Federaalka si loo mideeyo bulshada Galmudug.
“Waxaan marqaati ka ahayn in isku dayo badan oo arrintan ah ay fashilmeen, waxaan ka codsaneynaa in Ahlu-sunna ay arrintaan aqbalaan, dowladda cusub ee Soomaaliya ay fursad siiyaan, loona mideyn lahaa Galmudug, waxaan fursaddaan u bixinnay inaan idiin helno, idinkana inaad na heshaan aad bay muhiim idiin kugu tahay” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka.
Maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ayaa horey u diidanaa jiritaanka maamulka Galmudug, hase ahaatee dowladd Madaxweyne Farmaajo ayaa bilowday dedaal lagu wada hadalsiinayo Ahlu-sunna iyo Galmudug.